आधा संसार::Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
देश र समाज परिवर्तनका लागि कानुन व्यवसाय र राजनीतिलाई एकै साथ अघि बढाएको रञ्जिता कार्की बताउँछिन् । नेपाल ल क्याम्पसमा नेविसंघ अध्यक्ष, काठमाडौं जिल्ला अदालत वार एसोसिएनकी सहसचिव तथा झापा २ की क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष हुन् । महिलालाई पेसामा टिक्न कठिन संघर्ष गर्नुपर्ने उनको बुझाई छ । यद्यपि मेहनत, लगनशील र इच्छा ग¥यो भने अप्ठ्याराहरूलाई सहजै पन्छाउन सकिने उनको अनुभव छ । पेसामा महिलाको अवस्था तथा उनको निजी जीवनबारे कार्कीसँग तरुणले गरेको कुराकानी : ० तपाईं कानुन व्यवसायी कि राजनीतिकर्मी ? – पेसाले म कानुन व्यवसायी हुँ, समाजसेवा मेरो रुचिको विषय हो । राजनीतिमार्फत समाजसेवामा पनि समर्पित छु । ० कुन…
उपचार विधि प्रविधिको सहयोगबिना सम्भव हुँदैन । प्रविधिको सहयोगले डाक्टरले रोग पत्ता लगाएपछि उपचार गर्छन् । डाक्टरले उपयोग गर्ने प्रविधिलाई बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ भनिन्छ । बायोमेडिकल विषयमा इन्जिनियरिङ गरेकी भावना बराल प्रविधिबिना उपचार कल्पना पनि गर्न नसकिने बताउँछिन् । यस्तो महत्वपूर्ण विषय बायोमेडिकललाई राज्यले कसरी हेरेको छ भन्ने बारेमा बरालसँग तरुणले गरेको कुराकानी : ० बायोमेडिकल इन्जिनियरलाई कसरी बुझ्ने ? – यसको क्षेत्र व्यापक छ, त्यसैले यहाँ दुई शब्दमा भन्दा न्याय नहोला । तर सामान्य भाषामा भन्दा उपचारमा डाक्टरलाई सहयोग पु¥याउने…
केही दिनयता भूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्री यशोदाकुमारी लामा आक्रोशित छिन् । कर्मचारीले टेरेनन्, सञ्चारमाध्यमले आफूले बोल्दै नबोलेको कुरा लेखेको भनेर उनी आक्रोशित भएकी हुन् । सरकार, प्रतिपक्ष र कर्मचारी मिलेर काम गर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने र देश स्वीट्जरल्यान्ड बन्न धेरै समय नलाग्ने उनको निष्कर्ष छ । यिनै परिवेशमा राज्यमन्त्री लामासँग तरुणले गरेको कुराकानी : ० सरकारले गरेको निर्णयको धेरै आलोचना भयो नि ? – राज्यलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्नु हुँदैन । राज्य भनेको अविछिन्न हुन्छ । कतिपय निर्णय…
नौ वर्षसम्म सामाजिक परिचालकको भूमिका निर्वाह गरेकाहरू यतिबेला सडक आन्दोलनमा छन् । साविकको जिल्ला विकास समितिअन्तर्गतका सामाजिक परिचालकले स्थानीय तहमा आफूहरूलाई समायोजित गरियोस् भनेर आन्दोलन गरिरहेका हुन् । विदेशी दाताको सहयोगमा चलेको कार्यक्रम भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै कार्यक्रम पनि सकिएको छ । सरकारले अब थप समय राख्न नसक्ने निर्णय सुनाइदिएपछि सामाजिक परिचालक आन्दोलनमा उत्रेका छन् । नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघको अगुवाइमा आन्दोलन भएको हो । आन्दोलनको संयोजन गरिरहेकी मनिषा विमलीसँग गरिएको कुराकानी : ० तपाईंहरूको आन्दोलन किन ? –…
धनुषामा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएकी थिइन् पुष्पाकुमारी झाले । स्थानीय तहको निर्वाचन पटक पटक सरेकोमा त्यसलाई त्यति सहज मानिएको थिएन । तर १८ वटा स्थानीय तहको निर्वाचन र पछिल्लो संघीय संसद्को निर्वाचन कुशलतापूर्वक सम्पन्न भए । निर्वाचन अधिकृत झा भन्छिन्, ‘राजनीतिक दलले निर्वाचन चाहेको थियो, सकुशल सम्पन्न भयो । हामीले त व्यवस्थापन मात्र गरिदिएका हौं ।’ निर्वाचनको अनुभव र सरकारी सेवामा प्रवेशका बारेमा झासँग गरिएको कुराकानी ः ० निर्वाचन सफलतापूर्वक गराउनुभयो होइन ? – यो मैले भन्ने विषय होइन, मेघा…
मंगलबार,२५ पुष २०७४
जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भन्ने भनाइलाई जीवनको हरेक मोडमा आत्मसात गदै अगाडि बढ्नुभएको छ नारी उथ्थान केन्द्र नारायणगढकी अध्यक्ष पद्मा श्रेष्ठ ढेवाजु । ४० वर्षअघि शिक्षण पेसामा लाग्नु भएकी अध्यक्ष ढेवाजु विभिन्न सामाजिक संघ–संस्थामा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहन्छ । घरपरिवार, समाज अनि पेसा सबैलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नु आफ्नो खुबी हो भन्ने प्रावि द्वितीय श्रेणीको शिक्षक ढेवाजुसँग सिर्जना अर्यालले गरेको कुराकानी : ० डे«समा हुनुहन्छ विद्यालय जान लाग्नुभएको होला, हैन ? – हो, ९ बजिसक्यो नि अब जाने बेला भयो ।…
कैलाली–५ निर्वाचन क्षेत्रमा अधिकांश धनगढी उपमहानगरपालिका पर्छ । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले डा.आरजु देउवालाई उम्मेदवार बनाएको छ । डा.आरजुको चुनावी गतिविधिलाई धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला मिश्र भट्टले नजिकबाट नियालिरहेकी छन् । देउवाको चुनावी अवस्था, त्यहाँका मतदाताको मनोदशाबारे उपमेयर सुशीलासँग तरुणले गरेको कुराकानी ः ० निर्वाचनको माहोल कस्तो छ ? – नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार आरजु देउवालाई जिताउने माहोल छँदै थियो, त्यसलाई अझ विश्वासिलो र मजबुत बनाउन हामी लागिरहेका छौं । ० कसरी ? – अहिले हामी टोल भेलामा लागेका छौं…
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) की सचिव जानकी गुरुङलाई प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लागेको छ । एनआरएन आठौं विश्व सम्मेलनमा सहभागी हुन बेल्जियमबाट नेपाल आएकी गुरुङ यतिबेला काठमाडौं–५ का कांग्रेस उम्मेदवार डा. प्रकाशशरण महतको चुनावी अभियानमा छिन् । एनआरएन पदाधिकारी बैठक, छोरीको विवाह र आमनिर्वाचनले उनको नेपाल बसाई लम्बिएको हो । नेपाल बसाईको अनुभव, एनआरएन पदाधिकारी बैठक र अहिलेको निर्वाचनको सन्दर्भसँग तरुणले गुरुङसँग गरेको कुराकानी : ० नेपालमै बसोबास गर्ने गरी फर्किनुभएको हो ? – होइन, एनआरएन विश्व सम्मेलनमा सहभागी हुन…
नेपाली कांग्रेसले हुम्लाकी रंगमति शाहीलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको छ । गैरसरकारी संस्था खोलेर हुम्ली महिलाको मुक्तिका लागि योगदान दिएको बताउने रंगमति हुम्लाबाट कांग्रेसले संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचनमा जित हात पार्ने बताउँछिन् । मंसिर १० गते हुने निर्वाचनमा हुम्लाको राजनीतिक चहलपहल, त्यहाँको महिलाको अवस्था र उनले पु¥याएको योगदानबारे रंगमतिसँग तरुणले गरेको कुराकानी– ० हुम्लामा चुनावी अभियान कसरी चल्दैछ ? – अहिले हामी घरदैलो अभियानमा छौं, हुम्लाको भूगोल ठूलो भएकाले तीनवटा समूह बनाएर हामी घरदैलो अभियानमा जुटेका छौं । म चाहिँ अहिले…
चितवनको शरदपुर माविमा १३ वर्ष पढाएकी राधा पौडेल यतिखेर अमेरिका बस्दै आएकी छन् । डेढ दशकदेखि गीतसंगीतमा लागेकी राधा हाल एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति अमेरिकाकी उपाध्यक्षसमेत हुन् । समय र परिस्थतिले विदेशिनु परेको बताउने उनी अमेरिकामा बसे पनि आफू नेपाली भाषा र संस्कृति संरक्षणमा भने लागिरहेको बताउँछिन् । अमेरिकामा मोबाइल व्यवसाय गरिरहेकी उनी अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य नेपाली समाजको पहिलो पुरस्कारको प्रायोजकसमेत हुन् । प्रस्तुत छ, तरुणका लागि राधासँग पत्रकार सृजना अर्यालले गरेको कुराकानीका अंश : ० तपाई जन्मना साथ ममी ड्याडी…